I-2019 I-Peptide Degarelix Edume Kakhulu: Umuthi Osetshenziselwa Umdlavuza W Prostate
I-Peptide Degarelix powder: Umuthi Wangempela Osetshenziselwa Umdlavuza W Prostate
I-1. Uyini uDegarelix?
I-2. I-Degarelix powder isetshenziselwe ini?
I-3. I-Degarelix powder Mechanism of Action
I-4. Ukusebenzisana kweDegarelix
I-5. Ingabe kukhona ubungozi uma ngiphuthelwa umthamo we-Degarelix noma i-overdose?
I-6. Yimiphi Imiphumela Emibi Nezixwayiso Ezingaba Yimbangela?
I-8. Ulwazi olunzulu
Ngokungafani nalokhu, umdlavuza we-Prostate uye waba ngesinye sezifo ezisongela impilo yamadoda neyomzimba. Ukuvimbela nokwelashwa kusenesikhathi kuyadingeka ukwelapha lesi sifo. I-Degarelix powder umuthi osebenzayo ekwelapheni umdlavuza we-Prostate, futhi kufanele sithathe isinyathelo kuqala sokuqonda eminye imininingwane ebalulekile ngakho ukuze siyisebenzise kahle nangokuphephile.
UDegarelix (I-214766-78-6) yisidakamizwa sokwelapha ama-hormone esinciphisa inani lama-hormone emzimbeni, kufaka ne-testosterone. Ihlukaniswa ngaphansi kwesigaba semithi eyaziwa ngokuthi yi-gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor antagonists. Lesi sidakamizwa sokwenza i-peptide derivative saziwa ngegama laso lomkhiqizo "Firmagon". Okulandelayo imininingwane yayo:
Iklasi Lezidakamizwa: I-Analogue ye-GnRH; Umphikisi we-GnRH; Antigonadotropin
I-Molar Mass: I-1630.75 g / mol g · mol − 1
Imizila Yokuphatha: Ukujova okungangeneki
Ukwembiwa: Feces (70-80%), Urine (20-30%)
I-Elimination Half-Life: izinsuku ze-23-61
2. I-Degarelix powder isetshenziselwe ini?
I-Degarelix powder isetshenziselwa ukwelapha umdlavuza we-prostate advanced. I-FDA igunyaze umuthi wokwelashwa komdlavuza we-prostate advanced kwiziguli zase-US kwi-24th Disemba, 2008. Ku-17th NgoFebhuwari, i-2009, iKhomishini yaseYurophu yalandela futhi yavuma umuthi kaDegarelix ukuze usetshenziswe ezigulini ezindala zabesilisa ezinomdlavuza wendlala yesibindi.
Qaphela ukuthi Umjovo kaDegarelix kufanele welashwe ngudokotela noma umhlengikazi esikhungweni sezokwelapha. UDegarelix naye angasetshenziselwa ezinye izinhloso. ESweden, ngokwesibonelo, lesi sidakamizwa sifundelwa ukusetshenziselwa njenge-ejenti yokuhambisa amakhemikhali ukufaka injezelwa kwabenzi bokuya ocansini. Ukwelashwa umdlavuza webele kaDegarelix nakho kubhekwa njengenye indlela yokwelapha umdlavuza webele kwabesilisa.
Udokotela wakho angancoma lo muthi kwezinye izimo. Uma ungaqiniseki ukuthi kungani uphuza lo muthi, kubalulekile ukuthi ukhulume nodokotela wakho. Njengayo yonke eminye imishanguzo, akufanele unikeze omunye umuntu uDegarelix, noma ngabe enezimpawu ezifana nezakho. Lokhu kungenxa yokuthi umuthi ungaba yingozi uma uthathwe ngaphandle kokushiwo ngudokotela.
(1) Kufanele wazi okuthile okungeziwe ngaphambi kokuthatha u-Degarelix
Lezi ezinye izinto ezibalulekile okufanele wazi ngaphambi kokuthatha lo muthi:
UDegarelix angadala ukungabi nabuntu kwabesilisa. Uma ubheke phambili ekubeni ngubaba ngokuzayo, kubalulekile ukuthi ukhulume nodokotela wakho. Ungase uthande ukucabanga ngokugcina isidoda ngaphambi kokuqala ukwelashwa.
Lesi sidakamizwa asivunyelwe ukusetshenziswa ngabesifazane. Abesifazane abakhulelwe akufanele basebenzise lo muthi. Lokhu kungenxa yokuthi umuthi ungalimaza ingane. Abesifazane abancelisa amabele, noma labo abahlose ukuba nezingane, kufanele futhi bagweme ukusebenzisa lo muthi. Eqinisweni, abesifazane ngokuvamile akufanele basebenzise uDegarelix.
Akuphephile ukuthatha iDegarelix uma unesimo sempilo esiyingqayizivele. Qinisekisa ukwazisa udokotela wakho uma une-QT syndrome ende, okuyinkinga engathandeki yenhliziyo engahle ibangele ukukhubazeka, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, noma ukufa okungazelelwe. Kufanele futhi wazise udokotela wakho uma unesifo senhliziyo, izinso, noma isibindi. Tjela nodokotela wakho uma unamazinga aphezulu e-sodium, i-magnesium, i-potassium, noma i-calcium egazini lakho.
Kubalulekile futhi ukuthi utshele usokhemisi wakho noma udokotela uma ungayithinti imishanguzo ethile noma izithako ezithile. Lokhu kuzobenza bazi ukuthi ingabe ungalunganga umjovo kaDegarelix.
(2) Umthamo we-Degarelix injekishini
UDegarelix uza ngezindlela ezimbili:
I-120 mg vial: I-vial ngayinye esetshenziselwa eyodwa iqukethe i-120 mg ye-Degarelix powder njengoDegarelix acetate.
I-80 mg vial: I-vial ngayinye yokusebenzisa eyodwa iqukethe i-80 mg ye I-Degarelix powder njengoDegarelix acetate.
I-Degarelix iza ngefomu le-powder, okufanele lixubaniswe noketshezi futhi lifakwe ngaphansi kwesikhumba endaweni yesisu, endaweni ethile phakathi kwezimbambo ne-waistline. Okokuqala lapho uthola lo muthi, uzonikezwa imijovo emibili iDegarelix. Ngemuva komthamo wokuqala wokujova we-Degarelix, uzothola umjovo owodwa kuphela ngesikhathi sokuhambela kwakho kokulandela njalo ngenyanga.
Umthamo wokuqala uvame ukuphathwa nguDegarelix 240 mg ophethwe njenge-2 injekishini engalungiswa kaDegarelix 120 mg ngamunye ekuhlushweni kwe-40 mg / mL. Ngemuva komthamo wokuqala, uzothola umjovo owodwa we-subcutaneous of 80 mg ekuqoqweni kwe-20 mg / mL zonke izinsuku ze-28.
Lapho uzothola umjovo kaDegarelix, kufanele ugweme ukugqoka izingubo eziqinile, okhalweni noma ibhande elizungeze esiswini sakho lapho kuzofakwa khona umjovo. Ngemuva kokuthola umjovo weDegarelix, qiniseka ukuthi okhalweni lwakho noma ibhande lakho akubeki ingcindezi endaweni yomjovo. Kufanele futhi ugweme ukugaxaza noma ukusongela indawo lapho umuthi ulimale khona.
Ukwelapha izimpawu zomdlavuza we-Prostate okuncike ku-testosterone yokukhula kudinga izinga eliqhubekayo lokucindezelwa kwama-hormone. Ukufeza lokhu, kubalulekile ukuthi uDegarelix acetate aphathwe ngqo njengoba kunconywe udokotela.
Ukuqinisekisa ukuthi umuthi wakwaDegarelix usiza isimo sakho, kungadingeka ukuthi uhlolwe njalo ngegazi. Qiniseka ukuthi ugcina zonke izikhathi zakho zokulandelwa nodokotela wakho.
Kufanele futhi uqaphele ukuthi umjovo kaDegarelix ungathinta imiphumela yokuhlolwa okuthile kwezokwelapha. Uma ungaphansi kwalo muthi, qiniseka ukuthi utshela udokotela wakho ukuthi usuthole lesi sidakamizwa lapho wenza izivivinyo ezilandelayo zokwelashwa.
3. I-Degarelix powder Mechanism of Action
I-testosterone yabesilisa kuthiwa ivusa ukukhula kwamaseli womdlavuza ku-prostate. Izidakamizwa ezivimbela ama-testes ukuthi akhiqize ama-testosterone ayaziwa ukuthi ahamba kancane noma amise ukukhula kwamaseli womdlavuza ku-prostate. Kukhona nezidakamizwa ezivimba isenzo se-testosterone ngokunqamula ukunikezwa kwe-hormone yabesilisa kumaseli womdlavuza.
I-Degarelix powder (214766-78-6) isebenza ngokunciphisa inani le-testosterone ekhiqizwa ngokwemvelo ngumzimba. Ikwenza lokho ngokuvimba ama-GnRH receptors emthanjeni wezinhlayiya ebuchosheni. Lokhu kuvimbela ukukhiqizwa kwe-luiteinising hormone, ngakho-ke kuvimbela ama-testes ukuthi akhiqize i-testosterone.
4. Ukusebenzisana kweDegarelix
Njengazo ezinye izidakamizwa zomdlavuza, uDegarelix angasebenzisana neminye imithi nemikhiqizo yamakhambi. Lezi ezinye zezinhlobo zezidakamizwa ezingadala ukuxhumana lapho zisetshenziswa kanye noDegarelix:
Imithi elwa ne-emetic
Amanye amaprotheni kinase inhibitors
Imithi elwa nama-Macrolide
Uma sisetshenziswa kanye noDegarelix, eminye imishanguzo ingangeza ubungozi bohlobo lwesigqi senhliziyo esingajwayelekile esaziwa ngokuthi ukwanda kwe-QT. Usengozini enkulu ngalesi simo esibucayi nezinkinga zako uma:
Ingabe umdala (iminyaka engu-65 nangaphezulu)
Iba nomlando womndeni wezigqi zenhliziyo ezingejwayelekile noma isifo senhliziyo
Iba nomlando wokufa kwenhliziyo kungazelelwe
Iba nokushaya kancane noma ukushaya kwenhliziyo
Iba nesikhathi eside sokuphumula kwesikhathi se-QT
Ngibe nesifo sohlangothi
Iba ne-calcium ephansi, i-magnesium, noma amazinga e-potassium
Uma unanoma yiziphi zalezi zimo ezingenhla, noma udla imishanguzo ethile ukuphatha noma yisiphi isimo sempilo, kubalulekile ukuthi utshele udokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa umuthi kaDegarelix. Qiniseka ukuthi wazisa usokhemisi wakho noma udokotela wakho ngomuthi onikezwe, imishanguzo ethengisa izinto ezingekho emthethweni, izithako zokudla okunempilo, imikhiqizo yamakhambi namavithamini owaphuzayo noma ohlela ukuwaphuza. Lokhu kuzokusiza ukuvikela wena emithini engadala ukusebenzisana kweDegarelix.
Kubalulekile ukuxoxa nodokotela wakho ngezimo zakho zokwelashwa kanye nemithi ongayithatha ngezizathu eziningi. Okokuqala, kuzokwenza ukuthi udokotela akwazi ukuxoxa nawe ukuthi ukusebenzisa lo muthi neminye imithi kungasithinta kanjani isimo sakho sokwelashwa. Udokotela wakho uzokwazisa nokuthi isimo sakho sezokwelapha singathinta kanjani i-dosing, kanye nokusebenza kahle kukaDegarelix. Udokotela wakho uzokwazisa nokuthi ngabe yikuphi ukubhekwa okukhethekile okuzodingeka.
5. Ingabe kukhona ubungozi uma ngiphuthelwa umthamo we-Degarelix noma i-overdose?
Akunasipiliyoni somtholampilo kanye nobungozi obuhambisana nokulahleka noma ukweqisa ku-Degarelix. Noma kunjalo, akufanele uyeke ukuthatha lo muthi ngaphandle kokubonana nodokotela wakho. Uma kwenzeka uphuthelwa isikhathi sokujovwa umjovo wakho weDegarelix, shayela udokotela wakho ukuthola imiyalo.
Kusukela I-Degarelix acetate kufanele ihanjiswe ngudokotela, kuyaqabukela ukuthi i-overdose yenzeke. Uma kwenzeka kwe-Degarelix overdose, noma kunjalo, kubalulekile ukuthi ushayele isikhungo sakho sokulawula ubuthi noma ufune usizo lwezempilo ngokushesha. Yiba ukulungele ukukhombisa noma ukusho ukuthi yini oyithathileyo, ukuthi yimalini oyithathileyo nokuthi uyithathile nini.
6. Yimiphi Imiphumela Emibi Neziyeleliso Engadalwa NguDegarelix?
Njengayo yonke eminye imithi eminingi, iDegarelix ingadala imiphumela emibi ehlukahlukene. Imiphumela emibi ye-Degarelix ingaba mnene noma ibe nzima, futhi ingaba yesikhashana noma ihlale unomphela. Okulandelayo okujwayelekile Imiphumela emibi ye-Degarelix, abaningi abangazange batholwe yiwo wonke umuntu ophuza lo muthi:
Ubungako obunciphile bama-testicles
Isidingo esandayo sokuchama kaningi
Ukusabela kwesikhumba endaweni yomjovo, njengobuhlungu, ubomvu, ubunzima, ukuvuvukala
Yize imiphumela eminingi engehla ye-Degerelix engenhla ingeyimbi, ingaholela ezinkingeni ezinkulu uma ziphikelela isikhathi eside. Kubalulekile ukuthi ufune usizo lodokotela uma kwenzeka uqaphela imiphumela emisha engandile kodwa eyindida:
Amathambo aphukile noma izinhlungu
Ukulimazeka kwesifuba nokuvuvukala
Izimpawu ezinjengomkhuhlane, njengokukhwehlela, umkhuhlane, ukubanga kanye nomphimbo obuhlungu
Spike ku-cholesterol yegazi
Spike ekucindezelweni kwegazi
Njengoba uDegarelix anciphisa ukukhiqizwa kwe-testosterone, kungadala amazinga aphansi amaseli abomvu egazi, isimo esaziwa ngokuthi yi-anemia. Izimpawu zokuntuleka kwegazi emzimbeni zifaka isiyezi, isikhumba esigqamile, ukukhathala okungajwayelekile kanye / noma ukuphefumula, kubalulekile ukuthi uthintane nodokotela wakho ngokushesha. Udokotela wakho uzokwenza ukuhlolwa kwegazi ngezikhathi ezithile ukuqapha inani lamaseli abomvu egazini lakho.
UDegarelix kuthiwa futhi ukhulisa ubungozi besifo sikashukela. Uma unesifo sikashukela, kubalulekile ukuthi uhlolwe njalo ukuqapha amazinga kashukela wakho wegazi.
UDegarelix kuthiwa futhi ukhulisa ubungozi be-osteoporosis. Kungase kubangele ukuba ithambo linciphe futhi liqhekeke kalula. Uma usuvele unayo i-osteoporosis, kubalulekile ukuthi wazise udokotela wakho ukuze kunqunywe ukuthi isimo sakho sezokwelapha singakuthinta kanjani ukudonsa kwe-Degarelix.
Ezinye iziguli zingathola imiphumela emibi ye-Degarelix ngaphandle kwaleyo ebhalwe ngaphezulu. Uma kwenzeka uhlangabezana nanoma isiphi isibonakaliso esikwenza ungakhululeki noma sikukhathaze, kungcono ukubona udokotela wakho ngaphandle kokulibala.
Udokotela wakho angakuyala ukuthi uyeke ukuthatha imijovo kaDegarelix uma kwenzeka uthola izimpawu zokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Lezi zimpawu zingahlanganisa ubuhlungu besifuba obungazelelwe, izinhlungu ezigeleza emhlane wakho, umuzwa wokucindezela noma ukuqina kwesifuba, isicanucanu, ukuhlanza, ukujuluka, kanye / noma ukukhathazeka.
Udokotela wakho futhi angakweluleka ukuthi uyeke ukusebenzisa i-Degarelix uma kwenzeka uthola izimpawu zokuthi ungahambi kahle. Lezi zimpawu zingafaka i-angioedema, ebonakaliswa okhalweni, ubunzima bokuphefumula, nokudumba kobuso, umlomo, izandla kanye / noma izinyawo.
Kukhona okuhlukahlukene Isixwayiso sikaDegarelix ukukhumbula. Enye yazo ukuthi lo muthi ungadlula uketshezi lomzimba (ukuhlanza, umchamo, umjuluko, indle). Ngakho-ke, kufanele ugweme ukuvumela uketshezi lomzimba wakho ukuba luhlangane nezandla zakho noma isikhumba somunye umuntu nezinye izinsimbi zamahora we-48 okungenani ngemuva kokuthola umjovo weDegarelix.
Abanakekeli bayalulekwa ukuba bagqoke amagilavu ​​enjoloba okuzivikela ngenkathi behlanza uketshezi lomzimba wesiguli nalapho bephatha izembatho zokugeza noma namaphaphu. Izambatho ezingcolisiwe nezinwele zamanzi kufanele futhi zigezwe ngokuhlukile kwezinye izinto zokuwasha.
Ngenkathi kuneminye imiphumela emibi yakwaDegarelix okufanele ukhathazeke ngayo, kukhona nezinye izinzuzo zeDegarelix ongabheka phambili kuzo lapho usebenzisa lo muthi. Ezifundweni zemitholampilo, kuye kwaboniswa ukuthi umjovo kaDegarelix unikeza ukuncipha okusheshayo kwamazinga e-testosterone kunamanye amakhambi e-convectional hormonal therapy. Lo muthi awubangeli ukuthi kube nokuhlinzwa kokuqala kwe-testosterone okungenza ukuthi kube nezimpawu eziba zimbi zesikhashana kwezimpawu.
Enye inzuzo ye-Degarelix ukuthi umuthi uvame ukubekezeleleka kahle, ngaphandle kocwaningo kuveze ukuthi ukuvela kwesayithi lokulimala kwenzeka ngamaphesenti we-40 weqoqo lama-Degarelix group ama-X i-1 amaphesenti weqembu leuprolide. Lokhu kusabela kwakuyinto emincane kakhulu noma ngokulinganisela, futhi kwenzeka ikakhulu ngemuva komjovo wokuqala.
Imininingwane eyandulelayo evela ocwaningweni oluthile lomtholampilo ibonisa ukuthi uma kuqhathaniswa nama-agonist e-LHRH, uDegarelix waxhunyaniswa nokusinda okuphezulu kakhulu phakathi kwe-1st unyaka wokwelashwa. Iqiniso lokuthi amathuba wokulapha ngempumelelo umdlavuza wendlala yesibeletho liphakeme uma usebenzisa lokhu kwelashwa kungenye yezinzuzo zeDegarelix ezenza lo muthi ube yinto yokuzanywa.
Ukuphuza utshwala ngamanani amancane kubonakala kungathinti usizo noma ukuphepha kwe-degarelix. Kodwa-ke, kufanele njalo ugweme ukuphuza utshwala obukhulu lapho uthatha lo muthi.
Uma wena noma umuntu omthandayo enomdlavuza wendlala yesibindi, ngokungangabazeki enye yezinketho zokwelashwa ongayikhetha. Isizathu kuphela esingahle sicabange ukuthi kungani ungakhetha ukuhlinzwa ngaphezu kokwelashwa kwe-hormonal njengoDegarelix kungaba yindleko. Noma kunjalo, noma yimuphi umehluko wezindleko uzogcitshwa izinzuzo zeDegarelix.
8. Ulwazi olunzulu
Kungenzeka ukuthi uyazibuza ngentengo yeDegarelix. Izindleko ezijwayelekile zonyaka zokwelashwa ngeDegarelix cishe ziyi- $ 4,400. Lokhu kuhambisana nezindleko zezinye izindlela zokwelapha ezikhona zama-hormone zomdlavuza wendlala yesibindi. Intengo yomjovo kaDegarelix yomjovo we-80 mg isuselwa ku- $ 519 ngokuhlinzekwa kukafulawa owodwa wokujova. Izindleko zizobuye zincike ekhemisi olivakashelayo.
Ungathola futhi “UDegarelix uthenge online”Isikhangiso. Kodwa-ke kuzodingeka uqaphele kakhulu lapho uthenga lesi sidakamizwa online. Qinisekisa ukuthi uhlola kahle ingemuva nokukhuthala okufanele ngaphambi koku-oda umuthi kumthengisi online. Qinisekisa ukuthi umphakeli noma ikhemisi eliku-inthanethi lisemthethweni nokuthi abathengisayo kuyindlela esemthethweni nehlanzekile yezidakamizwa.
I-Degarelix kufanele igcinwe emazingeni okushisa asekamelweni. Qiniseka ukuthi uvikela lo muthi ekukhanyeni nasemshatheni. Njengayo yonke eminye imithi, gcina uDegarelix engafinyeleleki ezinganeni.
Musa ukulahla i-Degarelix powder kudoti wasendlini noma emanzini amdaka, isb. Endlini yangasese noma phansi echibini. Buza udokotela wakho noma osokhemisi ukuthi ungayilahla kanjani imithi ephelelwe yisikhathi noma engasasebenzi.
UVan Poppel H, iTombal B, et al (Okthoba 2008). UDegarelix: i-gonadotropin-releasing hormone (GnRH) ye-receptor blocker-imiphumela evela onyakeni owodwa, multicentre, okungahleliwe, isigaba sesibili sokutholwa komthamo ekwelapheni umdlavuza we-Prostate. I-Euro. I-Urol. I-54: 805-13.
I-US National Library of Medicine National Institutes of Health, Ukuhlaziywa kwezindleko zokusetshenziswa kwe-degarelix ekwelashweni komdlavuza we-prostate cancer osezingeni eliphezulu e-United Kingdom, uLee D1, uPorter J, uBrereton N, Nielsen SK, 2014 Apr; 17 (4 (233) ): 47-XNUMX.
UGittelman M, Pommerville PJ, Persson BE, et al (2008). Unyaka we-1, ilebula evulekile, umthamo wesigaba II wokuthola ucwaningo lwe-degarelix ekwelapheni umdlavuza wendlala yesinye in North America. J. Urol. I-180: 1986-92.